प्राकृतिक चिकित्सा : रोगमुक्त जीवनको सूत्र - Health TV Online
डा मनोज ढकाल
आज असार २० अर्थात राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस । नेपालमा आजको दिनमा प्राकृतिक चिकित्साको अवस्था र चुनौती के छन् भन्ने विषयमा आउनुस् चर्चा गरौं । तितो सत्य बोल्नु पर्दा प्राकृतिक चिकित्सालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा घोषणा गरेपनि यो प्राकृतिक चिकित्सक र आम नेपालीको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ यो चिकित्साबारे र यसका अनेक फाइदाकाबारे थोरैलाई मात्र जानकारी छ ।
यस्तो हुनुमा प्राकृतिक चिकित्साप्रति सरकारले गरेको बेवास्ता नै हो। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस केवल नारामा मात्रै सिमित रहन पुग्यो। राष्ट्रिय चिकित्साको नै पनि सरकारी दरबन्दी नहुनेले नै देखाउँछ यो कति बेवास्ता गरिएको चिकित्सा पद्धति हो भनेर । प्राईभेट र सामुदायिक स्तरमा यो चिकित्साले निकै राम्रो प्रगति गरेपनी सरकारको तर्फबाट अझै नै हेला गरिएको चिकित्सा हो यो भन्न सकिन्छ । अहिले पनि सामुदायिक स्तरमा नवलपरासीको रजहर सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय त्यसैगरी बागेश्वरी प्राकृतिक चिकित्सालय र प्राईभेटले कयौ बिरामी उपचार गरिरहे पनि सरकारले भने यो चिकित्सा बिधाको लागि केही काम गरेको देखिन्न ।
तर अहिले प्राकृतिक चिकित्साको उपचारको फाइदाको कारण आम मानिसले आफै बुझेर अहिले आम मानिसको रोजाईको बिषय पनि भएको छ। सायद यो हुन मा यो पद्धतिको कुनै साइड इफेक्ट नभएकाले र सफलता पूर्वक उपचार हुने भएकाले पनि होला । यसको लोकप्रियता ढिलो भएपनी आम मानिसमा बढ्दै गएको पाइन्छ । कुनै औषधीको प्रयोग नगरी, शल्यक्रिया नगरी, सुई नखोपी गरिने उपचार विधी हो, प्राकृतिक चिकित्सा । यो नै प्रभावकारी र हानिरहित विधी पनि हो । रोग लागिसकेपछि मात्र होइन, रोगमुक्त जीवन बाच्नका लागि समेत प्राकृतिक चिकित्सा उपयोगी हुन्छ । प्राकृतिक रुपमै बलियो, निरोगी, तन्दुरस्त हुनु पहिलो सर्त हो । रोग लागिसकेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिन नै सर्वोत्तम हो । अतः यसको एउटै सूत्र भनेको प्राकृतिक चिकित्सा नै हो ।
प्राकृतिक चिकित्सा के हो ?
प्राकृतिक चिकित्सा एक रचनात्मक उपचार गर्ने विधि हो जसको उद्देश्य प्रकृतिमा स्वतन्त्र रुपमा उपलब्ध तत्वहरूको प्रयोगको माध्यमबाट रोगहरूको आधारभूत कारण हटाउनु हो। प्राकृतिक चिकित्सा मुख्यत शरीर भित्र रहेको महत्त्वपूर्ण उपचारत्मक शक्तिको अस्तित्वलाई मान्यता दिन्छ। रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई बढवा दिन काम गर्छ । प्राकृतिक चिकित्सक यस्मा बिश्वास गर्छन कि शरीर आफैं स्वयम्ले नै रोग निको गर्छ। तसर्थ प्राकृतिक चिकित्सा शरीर भित्र रहेका डिफेन्स प्रक्रिया जस्तै ईम्म्युन प्रणाली , प्रोबावोटिक्स, अन्जियोजेनेसिस , स्टेम सेलजस्ता प्रतिरक्षी प्रणाली संतुलनमा राख्नेमा जोड दिन्छन । यसरी नै एउटा स्वस्थ शरीरको रचना हुन्छ । यो मात्र एक रोगसँग लड्ने सुरक्षाकवच हो। मानव शरीर तब सम्म स्वस्थ रहन्छ जब सम्म यि प्रतिरक्षा प्रणालीहरु सन्तुलित रहन्छन्। । यिनिहरुको गडबडीसँगै मानिस विभिन्न रोगको शिकार हुन पुग्छन । प्राकृतिक चिकित्सा एक विज्ञानमा आधारित परम्परा हो जसले प्रत्येक बिरामीको अनौठो पक्ष पहिचान गरेर स्वस्थतालाई बढावा दिन्छ र त्यसपछि उसको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, अध्यात्मिक र संरचनात्मक सन्तुलन पुनर्स्थापना गर्न गैर विषाक्त प्राकृतिक उपचारहरू प्रयोग गर्दछ। प्राकृतिक चिकित्सकहरूले तनाव घटाउने र आहार र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याएर विरामी हुनबाट रोक्ने लक्ष्य राखेका छन् ।
यसमा योग र व्यायाम थेरापी, एक्यूपंक्चर, हर्बल मेडिसिन, हाइड्रोथेरापी, डाईट र उपवास, माटो थेरापी, रङ्ग र चुम्बकीय थेरापी , मसाज थेरापी र आधुनिक विधिहरूको प्रयोग जस्ता जैव अनुनाद, ओजोन थेरापी र कोलोन जस्ता स्वीकृत प्राकृतिक उपचार अभ्यासहरू सामेल छन्। योसँग ठूलो स्वास्थ्य प्रवर्धन, रोग निवारक र उपचारात्मकका साथै पुनर्स्थापनात्मक क्षमता छ।
प्राकृतिक चिकित्सा मुख्यत रोग लाग्नु मा यी तीन कारण मान्दछ :
१ – शरीरमा बिषादी पदार्थहरु जम्मा हुनु ( गलत आहार)
२- रगत र लिम्फको असामान्य संरचना
३ – जीवन शक्ति कम हुनु ( तनाब र चिन्ता)
वास्तवमा जे जति रोग छन् ति सबैको कारण र उपचार करिब एउटै हो । शरीरमा जब विकार पदार्थ सञ्चय हुन थाल्छ, त्यही स्थितीलाई हामी रोग भन्छौं । अतः ति विकार निर्मूल गर्नु नै उपचार पद्दती हो । उपचारको विद्यमान विधी अनेक छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा प्राचिन, विश्वसनिय र प्रभावकारी उपचार पद्धती हो, प्राकृतिक चिकित्सा ।
प्राकृतिक चिकित्साले कुनै एक विषेश रोगको मात्र उपचार खोज्दैन, सम्पूर्ण शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्छ । रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्छ । शरीरमा कुनैपनि रोगको संभावनालाई न्युनिकरण गर्छ । प्रकृतिको उपचारमा दबिएर बसेका रोगहरूलाई माथि ल्याइन्छ र स्थायी रूपले हटाइन्छ । यसले दीर्घरोगबाट पनि मुक्त दिलाउँछ । यसको खास विशेषता भनेको के भने कुनै शारीरिक समस्या वा रोग मात्र होइन मानसिक र सामाजिक उपचार पनि गर्छ ।
डा ढकाल योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक एवं नेपाल योग तथा प्राकृतिक संघका कोषाध्यक्ष हुन्।
संक्रमणमुक्त भएको थाहा पाउन पुनः पीसीआर परीक्षण गर्नु पर्दैन्
९ वर्ष अघि क्यान्सर जितेँ अहिले कोरोना
हरेक दिन आधा घण्टा घाममा बस्नुस् ‘भिटामिन डी क्याप्सुल’ खानै पर्दैन
के हो मधुमेह ? मधुमेहले निम्त्याउने जटिलताबाट कसरी जोगिने ?
क्यान्सर त जितेँ भने कोरोना त के हो र भन्ने लाग्यो -आखिर कोरोनालाई पनि जितेरै छोडेँ
के हो बेडसोर अर्थात चाप घाउ ?
सलाम छ ती स्वास्थ्यकर्मीलाई..
सामान्य रुघाखोकी, फ्लू र कोभिड-१९ कसरी छुट्याउने ?
क्यान्सर विजेता प्रमिता भन्छिन्, समयमै उपचार गरे निको हुँदोरहेछ क्यान्सर